I-Android ihlawula i-3 yezigidi zeedola ukufumanisa iziphene zokhuseleko | I-Androidsis
I-Android ihlawule i-3 yezigidi zeedola kwimivuzo yokufumanisa iibhugi
UEder Ferreño | | Izaziso, Khu seleko
Malunga neminyaka emithathu edlulileyo Inkqubo yembuyekezo yasekwa kwi-Android. Injongo yayo yayikukuba abasebenzisi bafumane iziphene zokhuseleko kwinkqubo yokusebenza kaGoogle. Ukubuyisa, umvuzo wawuza kuhlawulwa kwabo bafumanisa ezo ziphene. Eyona nto imbi kakhulu kukuchongwa komngcipheko, kokukhona isixa-mali ekufuneka sihlawulwe.
Owona mvuzo mkhulu kule nkqubo Imivuzo yokhuseleko kwi-Android yi- $ 200.000. Nangona ukuza kuthi ga ngoku akukho mntu uphumeleleyo. Kodwa kubekho abasebenzisi abaninzi abaye bafumanisa ukuba sesichengeni kwinkqubo yokusebenza.
UGoogle utyhile idatha evela kunyaka ophelileyo ngokubhekisele kwinani lokungakhuselekanga okuye kwafunyanwa kwinkqubo yokusebenza. Kananjalo ezo ntlawulo zenziweyo kwaba bantu bebephethe ekufumaneni uthe iziphene zokhuseleko. Itotali eyi- $ 3 yezigidi kwimivuzo ukuza kuthi ga ngoku.
Kwakhona, Kubekho abantu abangama-99 okanye amaqela athe abona ukuba semngciphekweni okungama-470 kwi-Android kunyaka ophelile. Ndiyabulela kubo, iingxaki ezininzi zokukhusela kwinkqubo yokusebenza ziye zasonjululwa. Ke yindlela esebenzayo, ukongeza ekubeni nenxaxheba kubasebenzisi beengcali ngalo mbandela.
Owona mvuzo uphakamileyo waya kumphandi wezokhuseleko e-China, owafumana ukuba sesichengeni kokubini kwiiPixels. Kwimeko yakho, ufumene intlawulo ye- $ 105.000. Ke baninzi abasebenzisi abafumana isixa esikhulu semali sokufumana iziphene ku-Android.
UGoogle uya kuqhubeka nokusebenzisa le nkqubo, ukuza kuthi ga ngoku inika iziphumo ezilungileyo kakhulu. Ukuthatha inxaxheba kwabantu abavela ngaphandle kwenkampani kuluncedo olukhulu xa kufikwa ekufumaneni zonke iintlobo zeebugs kwi-Android okanye kwiifowuni zikaGoogle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Khu seleko » I-Android ihlawule i-3 yezigidi zeedola kwimivuzo yokufumanisa iibhugi